Mitengo yemakarotsi uye bheeti yakawedzera ne4,5 nguva pagore - "Potato System" magazini
Makarotsi uye nyuchi zvakakwira mumutengo ne4,5 nguva pamusoro pegore
Kwemavhiki mashoma apfuura, makarotsi uye mitengo yemabheetti yakwira kuita zvinyorwa muchikamu chepamusoro - gore rakapera kukura kwaive ka4-4,5 nguva, director director weUnited of Potato neMuriwo Vevatori veMusika (Potato Union) Alexei Krasilnikov akaudza Rossiyskaya Gazeta. Sekureva kwake, pamusuwo weNovorossiysk kubva kune mumwe wevashandisi, karoti svondo rapfuura raidhura 74 rubles. pa kg. Panguva imwecheteyo, kune yekutengesa yakawanda, mutengo wayo wenguva dzose wakaderera ne4-4,5 zvakapetwa. Uye mune mamwe maketeni ezvitoro, yakashambidzwa mhando dzakanaka dzekarotsi dzinotengeswa kweanoda kusvika zana zana rubles. pa kg.
Pakati penguva ino, hupenyu hwesherufu hwembatatisi yemiriwo uye miriwo inoguma. Kunyangwe nematanho eSoviet, munaJune 1, nguva dzakatarwa dzekupihwa kwezvirimwa mumidzi muzvitoro dzave kupera. Uye ikozvino, pamwe nekuvandudzwa kwetekinoroji yekuchengetedza, mbatatisi nemiriwo zvinogona kuchengetwa zvakareba. Zvisinei, midziyo yakadaro yekuchengetera haina kukwana, nyanzvi inotsanangura. Mukukwanisa kunodiwa nemaketeni ezvitoro, hapasisina chero mbatatisi nemiriwo pamusika, anodaro Krasilnikov. Zvigadzirwa zvinounzwa kunze kwenyika.
Asi kukwira kwakadai kwakadzika mumitengo yemakarotsi uye mabheji gore rino kuchiri kushamisika. Zvichida, iyo coronavirus factor yakasimudzwa - kuwedzera kwekudiwa mumusika wepasirese uye matambudziko ne logistics. Uye vatengesi vanobva vatora mukana weizvi, vachikwidza mitengo, anodaro. Uye zvakare, kunonoka kudyara kwaisa kumanikidza pamusika - gore rino, nekuda kwemamiriro ekunze, vakatanga mavhiki maviri gare gare. Zvakare zvakare, pakave nekatsika kekuderedza nzvimbo yemuriwo, anodaro Aleksey Krasilnikov.
“Kugadziriswa kwemitengo yakawanda yemiriwo yekunze nembatatisi kuri kutarisirwa apo chirimwa chitsva chiri kukohwewa. Kushanda kwemitengo yeboka rezvinhu iri ndekwechivanhu mwaka uno, ”Ministry of Agriculture yakaudza RG. Dhipatimendi rakacherekedza kuti ikozvino kwatova nekuderera kwemitengo kune huwandu hwemiriwo kubva kune vagadziri. Semuenzaniso, magaka akadonha ne6,2% pasvondo uye 18,1% pamwedzi, madomasi - ne8% pasvondo uye 20,3% pamwedzi. Mutengo wembatatisi kubva Chivabvu 26 wakawedzera ne2,9% pamwedzi. Kugadziriswa kweyakagadzika yemitengo yeminda yakavhurika miriwo uye mbatatisi, pakati pezvimwe zvinhu, zvichagadziriswa nekuwedzera kwenzvimbo dzakarimwa muna 2021, Ministry of Agriculture yakavimbisa.
Gore rakapera, goho rembatatisi, makarotsi uye bhitetesi raive rakaderera ne10% nekuda kwemamiriro ekunze - pakutanga pakanga paita kusanaya kwemvura, ndokuzonaya. Naizvozvo, pamusoro peizvozvo, miriwo yakazove isina kunyorova. Naizvozvo, zvakabva zvave pachena kuti mutengo wemakarotsi uye mabheti uchakwira, anotsanangura Tamara Reshetnikova, General Director wekambani yekutsvaga "Growth Technologies". Pakutanga kwesvondo rapfuura, miriwo yemuno yanga ichiri kutengeswa muzvitoro, asi yanga yatove yemhando isina kunaka. Sezviri pachena, ngetani dzekutengesa dzakavasiya vachida zvekunze. Uye ikozvino pamusika, karoti uye bheet zvinotengwa kunze kwegore rapfuura, izvo zvakange zvakachengetwa kune dzimwe nyika, kana nyowani, zvakakohwewa muAsia neAfrica nyika, uko mwaka wacho wakasiyana. Nekudaro mitengo yakakwira, nyanzvi inodaro.
Sekureva kwenzvimbo yekutengesa-yekuongorora bhizinesi rezvekurima "AB-Center", kukwira kwakapinza kwemitengo yezvakawanda yemakarotsi nebeet yakatanga musi waMay 14. Kubva muna Chivabvu 21, 2021, avhareji mitengo yekutengesa karoti yaive 26,1 rubles. pa kg. Gore rapfuura, mitengo yemakaroti yaive 13,1 rubles. pa kg. Mitengo yezvakawanda yebeetroot musi waMay 21 yaisvika 27,9 rubles. pa kg. Gore rakapfuura, vaive 10,4 rubles. pa kg.
Source: Pepanhau reRussia
Tags: mitengo yemakarotsi uye nyuchi
The company McCain akatanga kuvaka chirimwa mudunhu reTula
Mamiriro ekunze asina kujairika muna Chivabvu-2021 akakanganisa mamiriro ezvirimwa kumatunhu eRussia